KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Hub iyo Walxaha Qarxa oo Lagu Qabtay Kismaayo
Thursday 3 January 2013 09:26
Hub iyo Walxaha Qarxa oo Lagu Qabtay Kismaayo
Kismaayo (KON) - Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Raaskaambooni ee ka arrimiya magaalada Kismaayo ayaa xalay fiidkii gacanta ku dhigay baabuur ay saarnaayeen hub iyo walxaha qarxa.
Baabuurkaan lagu qabtay walxahaan oo ah nooca ay Soomaalidu u taqaano Caasiga ayaa ka yimid dhanka degmada Jilib ee gobbolka Jubbada Dhexe oo ay Shabaab maamulaan, sidaasna waxaa Keydmedia Online u sheegay C/naasir Seerar oo ah Afhayeenka Maamulka Kismaayo.
Mr Seeraar ayaa intaasi ku dary in baabuurkaan lagu qabtay Kontaroolka waqooyi ee Kismaayo ee ku yaalla wadada Kismaayo ka baxda ee Muqdisho aada.
Baabuurkii hubka lagu qabtay iyo labo qof oo saarnaa ayaa loo dhaadhicyay dhanka saldhiga degmada Kismaayo hakaasii ay hadda ku xiranyihiin.
Sikastaba, lama oga sida Ciidamadu ka yeeli doonaan labadii qof ee lagu qabtay baabuurka hubka iyo walxaha qarxa ay saarnaayeen.
Wixii ku soo kordha kala soco WWW,Keydmedia.net